ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : ဆ ရာတေး ရဲ့ မြေကြီး နဲ့ကောင်းကင်
အမေရိက တိုက်ကို ကိုလံဘတ်(စ်) Christopher Columbus လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၅၂၀ လောက်က တွေ့ ခဲ့တယ် ဆိုတာ ဖတ်မိကြမှာပါ။ အင်း သူတို့မတွေ့ ခင်တုန်းက ဒီ အမေရိက တိုက်မှာ လူနီရိုင်းတွေ နေခဲ့ကြတယ် red indians (Native American) တွေလေ။ လူဖြူတွေ လာရောက်အခြေ ချစဉ်မှာ သူတို့ ဟာ
1854 မှာ ဝါရှင်တန် က အမေရိကန် အစိုးရ က လူနီတွေ ကို မေးတယ်။ " ခင်ဗျားတို့ နေရာကို ဝယ်ချင်တယ် ဝယ်လို့ ရမလား" တဲ့
အဲဒီမှာ(Chief Seattle) လူနီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင် မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ နာမည် ဆရာတေး က
" သမ္မတ က ငါတို့မြေကို ဝယ်ချင်သတဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကို ရောင်းလို့ ဝယ်လို့ ရမလဲ။ တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့စကားဘဲ ငါတို့ တွေအားလုံး မြေသင်းနံ လေးတွေ၊ ရေမှုန်ရေမွှား ကျသံလေးတွေ ကိုမှ မပိုင်ဆိုင်တာ။ ကိုင်းဒါဆို ဘယ်လို ဝယ်မှာလဲ။
ဒီမြေကြီးပေါ်မှာ ရှိသမျှ ငါတို့ လူနီရိုင်းတွေအတွက် ကတော့ ရတနာတွေချည်းဘဲ။ ငါတို့ ငါ မြေကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ မြစ် ချောင်းတွေဟာ ငါတို့ ရဲ့ညီအကိုဘဲ။ သောက်သုံးရေ အပြင် ငါတို့ ရဲ့ ကနူးလှေတွေ ကိုလဲ ဖြတ်သန်းသွားလာ နိုင်တယ်။ ဒါ့ ကြောင့် ဒီမြစ်တွေ ချောင်းတွေ ကို ငါတို့ ညီအကို လို ကြင်နာမှု ထားရမယ်။"
ဒါကတော့ ဆရာတေး သမ္မတကိုဒီလို တုန့်ပြန်လိုက် ပါတယ်။
" We will consider your offer to buy the land, but I will make one condition. You must treat the beasts of the land as your brothers. I have seen thousands of rotting buffaloes on the prairie left by the white man who shot them fromapassing train. I amasavage and do nto understand how the train can be more important than the buffalo that we kill only to stay alive.
I don't know. Your ways are different to ours. The sight of your cities hurts the eyes of the red man. This is no quiet place, no place to hear the unfurling of the leaves in the spring or the rustle of the insects's wing. You treat in the spring or the rustle of the insect's wing. You treat the earth and the sky like things to be bought and sold. Your appetite will devour the earth and leave behind onlyadesert.
We know this: the earth does not belong to man. Man belongs to the earth. We love this earth asanewborn baby loves his mother's heartbeat. We are part of the land. You too are part of the land. One thing we know: no man can be apart. We are brothers after all."
အခုဆိုရင် အမေရိကတိုက်မှာ ဆရာတေးတို့ ရဲ လူ ဦးရေ ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့၁.၃၇ % လောက်သာရှိပါတော့တယ်။
ဆရာတေး ချစ်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လေးအကြောင်းပြောထားတာ ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ ကြည့်ပါ။ အားလုံးပါတယ်။ The Wind, The sky, The earth, The River, animals, The air, The Sun, The mist, Insects, Horses, Trees, The rain, flower, bear, deer, rock, pony, human, အားလုံးပါတယ်။ သူဘယ်လိုစိတ်ထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ တွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောပြထားတယ်။ တော်တော် ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေပါ။
Posted by ရိုးရိုး at Thursday, November 04, 2010
Anonymous4November 2010 at 18:36
ဟေ့ နက်ဖန်မှ အစိန်ကြီးလာဖတ်မယ် ခုတော့ နောက်ကျနေပီမို့........ နွမ်းလိုက် ဦးမယ် ဘလော့ရှင်ရေ........
ခုတော့ စာမြည်းမြည်းသွားရုံပဲ......... :D
ရိုးရိုး5November 2010 at 00:23
ကောင်းပါပြီ။ ကျင်ဖတ်ခယို နွမ်း ကော့လီရို ပေါ့။ ကျေးဇူး နာမ်နာမ် ပါ။